Gabadhyahay Ninka Astaamahaan Leh In La Guursado Ayuu Istaahilaa Ee Yuusan Kaa Fakan - Daryeel Magazine
Gabadhyahay Ninka Astaamahaan Leh In La Guursado Ayuu Istaahilaa Ee Yuusan Kaa Fakan
Gabadh kasta markey guursanayso waxa gala cabsi iyo welwel xoogan iyo su’aalo badan oo ay is waydiso ninka ay guursanayso sidu ku noqon laha.
Guurku wa sunahi Nabigena(scw)marka walashay ninka sunaha nabiga ku dhaqmaya dardaranki nabigana(scw) ku dhaqa oo xifdisan xadiisyada Nabigena(scw) kaso ororey waxu fahmaya guurka macnahisa adigana wa ku dhaqanaya lakiin nin aan ku dhaqmeyniin diintisa haka sugin inu ku dhaqdo.
Ma rabta walashay inaad heesho nin kuu qalma oo ku dhaqda reerkaguna noqdo mid ku waara faarxad iyo degenaansho walaashay talada daryeelmagazine.com ee so socota qaado insha allaah waxana rajayni inu ku anfici doono kuna guleysan doonto idanka allah.
-Diintisa iyo Akhalaqdisa, ninka diinta u saxiibka ah adiga iyo caruurtadaba wa idin dhaqan.
-wa inu yahay nin masuliyad qaadi kara reerna dhaqan karo.
-Wa mid ku kalsoon xaaskisa kalana tashta arimihisa shaqada danahisa iwm
-Wa mid marwalba ixitiraama waalidka xaaskisa iyo qarabadeeda kuna dadala inu xiririyo..
-wa mid marku albaabka kaso galo u dhoolo cadeya kuna salama salamada islaamka una sheega intu maqna inu u xiisay.
-Wa nin marwalba ku dadala oofiinta balanta dacaadna ah ma khyaano xaaskisa wa ki marwalba dacaad u ah. daryeelmagazine.com
-Wa mid aan ku dhaqmin khayanada iyo beenta kana fog.. Ma caayo xaaskisa mana xaqiro kumana qayliyo
-haday bukooto waxu darensiya inu la bukoonayo guriga kama baxo caruurta iyo gurigu ka cawiya wuxuna ku dadaala inu iloowsiyo xanuunka haya lamanahiisa.
-Wa mid marwalba xaaskisa hadalo macmacan ku odhanaya oo dareensiya jeceylku u hayo xaaskisa.
-Wa mid ku Samra dhibta xaaskisa haday ku gaftana waakii caqligisa isago kashanaya si degen oo raxmad iyo naxaris leh wax ugu sheega.
W/Q: Zainab Maxamed Cali
Astaamaha Lagu Garto Ninka Wanaagsan Ee Mustaqbal Doonka Ah Calaamadaha Ninka Wax Jecel Cunto Cayilka Kaa Ridaysa Mudo Gaaban, Nafaqo Badanna Leh Hurdo Intee Le’eg Ayuu Qofku U Baahanyahay Bisha Ramadaan?